21554 पटक पढिएको
अन्तर्वार्ता न्यायपालिकामा भएको राजनीतिक भागबन्डाले दूरगामी असर पार्ने दाबी गर्छन् पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय। प्रजातन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा न्यायालय स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। सबै क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गरेकाले कुनै पनि संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्र अस्तित्व नरहेकोमा उपाध्याय चिन्तित देखिन्छन्। न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन,न्यायाधीश नियुक्ति, मानवअधिकार र टीअारसीलगायत समसामयिक विषयमा उपाध्यायसँग यम विरहीले गरेको कुराकानी।
-न्यायलाई पवित्र र सक्षम बनाउन प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कति हुन्छ ? हो । न्यायपालिकाको गरिमा उचो राख्न सबभन्दा बढी भूमिका प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशमै ‘डिपेन्ड’ गर्दछ । संस्थाको मर्यादा उसैमा निर्भर रहन्छ । जस्तोसुकै व्यक्ति होस्, त्यो पदमा गएपछि पदीय मर्यादा र व्यक्तित्व राख्न सक्नुपर्छ । त्यो कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिप्रसाद, भगवतीप्रसाद, अनिरुद्रप्रसाद सिंहले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मान बढाएरै गए । पछि विश्वनाथ उपाध्यायले जुडिसियरीलाई फैसलाबाट मात्रै संस्था बनाउनुभएको थिएन, स्रोत र साधनको विकासमा पनि जोड दिनुभयो ।
-भर्खरै मात्र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भयो । नेपाल बार, सरकारी वकिल र विभिन्न क्षेत्रबाट कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको, राजनीतिक हस्तक्षेप भएको, वरिष्ठता मिचिएको, नातावाद हाबी भएको, समावेशी नभएको जस्ता आलोचना भए नि ? हेर्नोस् । त्यो समयमा यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । एकजना प्रधानन्यायाधीशको पालामा कस्तो भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो मान्छेलाई न्यायाधीशमा राख भन्नुभयो, तर प्रधानन्यायाधीशले अडान लिएपछि त्यो सम्भव भएन । पछि ती व्यक्ति सचिव पनि भए । उनको नाम म भन्दिनँ । राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गरिएको छ । न्याय परिषद्को संरचनामा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश हुन्थे । तर पछि आएर न्यायपरिषद्को संरचना बदलियो । अहिले आएर दुईजना वकिल भइदिए, दुइटा पार्टीको ।
-न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबन्डाले न्यायपालिकामा कस्तो असर पार्ला ? दूरगामी असर पार्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा पनि नराम्रो असर पार्छ । त्यसको असर विस्तारै देखिँदै जानेछ । पछि गएर नेपाल बार र वकिलहरूले पनि यसको भुक्तानी व्यहोर्नुपर्नेछ । अहिले जुन–जुन राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेका छन्, भोलि गएर कतिपय राजनीतिक ‘केश’ हरूमा यसको प्रभाव देखिन्छ । जुन राजनीतिक पार्टीले त्यो न्यायाधीशलाई अगाडि बढाएको हुन्छ, उसको पक्षको मुद्दामा त्यहीअनुसारको निर्णय आउँछ । अहिले हेर्नुस् न, संवैधानिक इजलास नै गठन नगरी ‘पोलिटिकल केश’ मिलाइराखेका छन् ।
- संवैधानिक इजलास गठनको कुरा गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशदेखि नै गठन हुन सकेन । यसले गम्भीर संवैधानिक विवादमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसरी संविधानको परिपालनामा मद्दत पुग्छ र ? प्रभाव पर्छ । जस्तो–न्यायाधीश नियुक्तिमै रुलिङ पार्टीसँग ‘कम्प्रमाइज’ गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले यसो गर्नको लागि ‘बेट’ को रूपमा राख्न सक्छ । संवैधानिक मुद्दा पर्‍यो भने प्रधानन्यायाधीशले तपाईंको मुद्दामा यसो गर्छु भन्न सक्छ या प्रतिपक्षी पार्टीलाई पनि भन्न सक्ने भयो । तर यस्तो स्थिति आउन दिनु हुँदैन । यस्तो अवस्था आउनुअघि नै संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले तजविजमा यो कुरा राख्नु हुँदैन । कल्याणजी (यसअघिका प्रधानन्यायाधीश) ले नै पहिले के भन्नुभयो भने अहिल्यै न्यायपरिषद् गठन भएको छैन ।
-परिषद्ले न्यायाधीश खाली हुनेबित्तिकै पदपूर्तिको लागि सिफारिस, समयमै सरुवा र उजुरीमाथि छानबिन एवं कारबाहीको निर्णय गर्न नसकेको आरोप छ नि ? के हुन्छ प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ? संविधानतः न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले यसको जिम्मेवारी उसैको हो । न्यायपरिषद् भनेर संस्थालाई देखाउने कुरा होला, तर सदस्यहरूले त पेस भएको प्रस्तावमा मात्र निर्णय गर्ने हो । सरुवा र नियुक्तिका सम्बन्धमा परिषद् सचिवले लिस्ट तयार गरेर पेस गरेपछि सबै काम गर्ने प्रधानन्यायाधीशले नै हो । न्यायाधीशविरुद्ध परेको कुनै उजुरीमा हेर्न लगाउने र छानबिनको लागि तोक्ने काम पनि प्रधानन्यायाधीशकै हो । यस्ता कुरामा सचिवले पनि बेलाबलामा प्रधानन्यायाधीशको नोटिसमा ल्याइराख्नुपर्छ ।
-न्यायाधीश समाजजस्ता संस्था गठन गरेर एनजीओ, आईएनजीओको हस्तक्षेप निम्तियो भन्ने गुनासा आएका छन् । न्यायलाई प्रभावित पार्न यस्ता संस्था वा एनजीओको कति भूमिका हुन्छ ? एनजीओको भन्दा पनि यूएनडीपीको जुन रोल छ, त्यसको एउटा ‘एक्सेस टु जस्टिस’ भन्ने प्रोजेक्ट छ । त्यो प्रोजेक्टले न्यायमा पहुँच बढाउन कति पैसा खर्च गर्‍यो, त्यसको फाइदा के के भयो भन्नेबारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यूएनडीपीजस्तै यहाँ अरू डोनरले पनि खर्च गर्छन् । बंगलादेशमा कस्तो बिल्डिङ बनेको छ भनेर हेर्न न्यायाधीश घुम्न गए । इञ्जिनियर वा ओभरसियरलाई बुझन पठाउन सकिन्थ्यो । त्यहाँ कस्तो बिल्डिङ छ भन्दा पनि यहाँ हाम्रो अदालतलाई कस्तो चाहिन्छ भन्ने प्रमुख विषय हो ।
-प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख भएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पर्‍यो कि परेन ? न्यायपालिकामा त असर पर्‍यो नै । जेसुकै भने पनि रेग्मी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुन्थ्यो । दामोदरजी त ‘सेकेन्ड म्यान’ मात्रै हुनुहुन्थ्यो । रेग्मी नै संस्थाको प्रमुख भूमिकामा भएकाले सिद्धान्ततः राम्रो कुरा थिएन । यसले भोलि नराम्रो परम्परा बसाउँछ । यस्तो स्थिति भोलि नआओस् । प्रधानन्यायाधीशले कुनै किसिमको प्रलोभन राख्नु हुँदैन, न्यायिक परम्परा नै बिग्रिन्छ । तिनीहरूले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ पनि भने । त्यसो हो भने ‘रुल’ किन चाहियो त ? किन मान्नुपर्‍यो ? आवश्यकता (नेसेसिटी) को बेलामा पनि सिद्धान्तलाई छोड्नु हुँदैन । त्यसलाई समाधान गर्न अरू उपाय निकाल्नुपर्छ । आज आवश्यकता छ, सिद्धान्त छोड्नु भन्न मिल्दैन ।